September 2018 – Page 28 – SHABAKADA HIIRAAN XOG
Madaxda maamul goboledyada dalka oo ku wajahan magaalada Kismaayo
Hiiraan Xog, Wararka naga soo gaaraya Magaalada Kismaayo ee Caasimadda KMG ah ee maamulka Jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka socoto qabanqaabadda soo dhawweynta madaxda maamul goboleedyadda. Madaxweynayaasha maamul goboleedyadda ayaa qaarkood maanta […]
AKHRISO:- Fariin ku socoto madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
Hiiraan Xog, Qaar ka mid ah dhalinyaradda Soomaaliyeed ee ku xiran dalka Cummaan ayaa Farriin u soo diray Madaxda Sare ee dalka, taasoo ku aadan in laga sii daayo xabsi ay ku xirnaayeen Muddo. Dhalinyaraddaan ayaa […]
AKHRISO:- Warbixiin ku saabsan muranka qilaafka u dhaxeeyo maamulka Galmudug
Hiiraan Xog, Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabey ayaa sheegay in dhawaan lasoo Afjari doono Khilaafkii u dhaxeeyay Madaxda Sare ee maamulka Galmudug. Carabey waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal badan […]
Dowlada Mareykanka oo dhaqaalihii ay siinjirtay dalka Falastiin joojisay
Hiiraan Xog, Dowladda Mareykanka ayaa joojisay dhammaan dhaqaalihii uu siin jiray hay’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan qaxootiga Falastiyiniinta sidda ay sheegeen qaar ka mid ah Hay’addaha Gargaarka. Heather Nauert oo ah afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka […]